शैलुङको कोरोना प्रतिकार्यः स्वच्छता प्रवर्द्धनमा सहकार्य - Netizen Nepal
शैलुङको कोरोना प्रतिकार्यः स्वच्छता प्रवर्द्धनमा सहकार्य
in कोरोना विशेष, गतिविधि, गहन स्टोरी, नेटिजन टिभी, नेटिजन विशेष, मुख्य समचार, वर्गीकृत, समसामयिक, स्वास्थ्य
दोलखा, २५ चैत । वि.स. २०७६ साल चैत ११ गतेबाट देशव्यापी रुपमा बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि कोरोना महामारीको प्रतिकार्य राष्ट्रियस्तरमा नै प्राथमिकताको विषय बन्यो । यो एक वर्षको समयमा राज्यले यो महामरीवरिुद्ध ठूलो धनरनशी खर्च गरेको छ । यसका बाबजुत पनि कोरोना महामारीले गर्दा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । कोरेनाविरुद्धको प्रतिकार्यमा स्थानीय सरकारको प्रयास र सक्रियता उल्लेख्य छ ।
गाउँगाउँको जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानिय सरकारको भूमिका महत्वपुर्ण रह्यो । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका आफनै अनुभव र सिकाइ जस्तै दोलखाको सैलुङ्ग गाउँपालिकाको पनि आफ्नै किसिमको सिकाइ छ । नागरिकलाई स्वच्छता व्यवहारको बारेमा जनचेतना फैलाउने, मास्क, स्यानीटाईजर वितरण, सामाजिक दुरीको सन्देश दिने, हात धुने ठाउँको व्यवस्थापनबाट यहाँको प्रतिकार्य शुरु भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । गाउँपालिका भित्र रहेका सबैलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था देखि बाहिरबाट आउँनेलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने सम्मका काम यो गाउँपालिकाको शुरुवाती प्राथमिक कार्य थियो । लकडाउन लम्बिदै गएपछि गाउँपालिकाकाले विभिन्न संघसंस्था संगको सहकार्यमा स्थानियलाई नै तालिमको व्यवस्था गरेर स्थानीय स्तरमै आवश्यक मास्क र स्यानीटाईजरको उत्पादन गर्न थाल्यो ।
अहिले नगरपालिकाले यो अनुभूत गरेको छ कि मास्क लगाउँने र बारम्बार साबुनपानीले हात धुने व्यवहारले गर्दा कोरोना संक्रमण मात्र होइन झाडा पखाला लगायतका सरुवा रोगहरुमा समेत कमि आयो । स्वास्थ्य विज्ञक अनुसार हात धुनेुजस्तो सामान्य लाग्ने व्यवहारको नियमित रुपमा पालना गर्न सकिए मात्र पनि ४८ प्रतिशत सरुवा रोगमा कमी आउँछ । यो कुरा गाउँपालिकाले पनि अनुभूत गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलाल । उहाँ भन्नुहुन्छ “त्यसैले महामारीका समयमा सिकेका यस्ता सकारात्मक व्यवहारलाई निरन्तरता दिन सकेमा विभिन्न रोगहरुबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ ।”
सैलुङ्ग गाउँपालिकाले स्वच्छता संग जोडिएका व्यवहारलाई निरन्तरता दिनका लागि अहिले पनि अभियान नै संचालन गरेको छ । सैलुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारत प्रसाद दुलाल भन्नुहुन्छ, “हामीले स्वास्थ्य व्यवहारको पालनाका लागि धेरै कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्यौं । सुरुसुरुमा मानिसलाई बानि लगाउनै कठिन थियो । बिस्तारै बानि परिवर्तन भयो । स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याएपछि मानिसमा लाग्ने झाडापखाला, आउँ, रुघाखोकी लगायत धेरै सरुवा रोगहरुमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।” महामारीबाट छुटकारा पाइसकेपछि पनि यी व्यवहारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।
महामारीका कारण सैलुङ्ग गाउँपालिकाले पनि कोरोना संक्रमण र मानविय क्षतिसम्मका घटना भोग्नुपर्यो । दुई जना स्थानियसहित एक जना वडाध्यक्षको ज्यान पनि गयो । यद्द्यपी स्थानियलाई सुरक्षित राख्नका लागि यस गाउँपालिकाको भूमिका भने उदाहरणीय नै रहेको छ । लकडाउनको सुरुवाती चरणमा गाउँपालिकाले के कस्तो भूमिका खेलेको छ त ? यस बारेमा अध्यक्ष दुलाल भन्नुहुन्छ, “लकडाउन घोषणापछि सबै क्षेत्रमा माइकिङ्ग गरेर स्वच्छता व्यवहारको बारेमा जनचेतना जगायौं , कोरोना के हो र कसरी सर्छ, कसरी जोगिने भान्ने बारेमा ५ हजार पर्चा छप्यौ, प्रचार प्रसार गरायौं । पहिला ६ वटा स्वास्थ्य चौकी थिए, बाँकी ६ वटा थप गर्यौं र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तयारी अवस्थामा राख्यौं । स्वास्थ्यकर्मीका लागि मास्क, स्यानीटाईजर, पिपई, पन्जा र आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गरायौं।”
गाउँपालिकाले स्थानियको घरघरमा गएर उनीहरुको गुनासो सुन्ने र आत्मबल बढाउनका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय समन्वय समिति र प्रत्येक वडामा वडास्तरिय समन्वय समिति गठन भयो । घरघरमा गएर स्वास्थ्य सुरक्षा र अभ्यासको पालनाका लागि मानिसहरुलाई चेतना जगाएर उनीहरुको आत्मबल बढाउने प्रयास गरेको समेत अध्यक्ष दुलाल बताउनुहुन्छ ।
गाउँपालिका मात्र होइन वडास्तरिय समन्वय पनि चुस्त दुरुस्त थियो । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरु जनताको घरघरमा गएर विवरण संकलन गर्दै र राहत वितरण गर्ने कामसंगै स्वच्छता व्यवहारको बारेमा पनि कार्यक्रमहरु संचालन गरियो । सैलुङ्ग गाउँपालिका वडा नं ३ का अध्यक्ष ध्रुब श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “कोभिड जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने मुख्य व्यवहार जस्तै मास्कको प्रयोग, दुरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुने व्यवहारलाई वडास्तरसम्म सक्रियताका साथ अघि बढाइयो । गाउँपालिकाले यस्ता व्यवहारको नियमित पालनाका लागि सार्वजनिक स्थानमा हात धुने सुविधा उपलब्ध गरायो । हात धुने सुविधाका लागि १०० स्थानमा ५०० लिटर क्षमताका पानीको ट्यांकी राखिएको थियो । जुन अहिले पनि छ । यसैगरि सिडीएफ र वाटर एडसंगको सहकार्यमा गाउँपालिका, ८ ओट वडा कार्यालय र १२ ओटा स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा खुट्टाले थिचेर हात धुने आधुनिक धारा जडान गरियो । यस्ता धारको सुविधाले पनि मानिसहरुलाई हात धुन प्रेरित गर्यो । अहिले पनि यी हात धुने स्थानहरु प्रभावकारी भएका छन् ।
गाउँपालिकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै मास्क, स्यानीटाईजर किन्नका लागि विद्यालयका प्रति विद्यार्थी १०० रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको थियो । अध्यक्ष दुलाल थप्नुहुन्छ, “बालबालिकालाई महामारीबाट जोगाउन पानीको ट्यांकीको व्यवस्था गर्यौं । यसैगरि सामाजिक दुरी लगायतका कुरामा घरघरमा गएर चेतना दिंदा जनतालाई पनि हामीप्रति भरोसा जाग्न थाल्यो।”
मास्क, स्यानीटाईजरको प्रयोग, भौतिक दुरी, हात धुने व्यवहारहरु अनिवार्य भए पनि सुरुका दिनमा नियमित पालना गर्नका लागि अलि कठिन थियो । किनकि मानिसमा यो व्यवहारको आदत बसिसकेको थिएन । जसले गर्दा सुरुवाती दिनहरुमा यसको पालना गराउने काममा जनप्रतिनिधिहरुलाई हैरानी समेत भएको थियो । वडा नं ३ का अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, लकडाउनको सुरुवाती चरणमा संक्रमणका घटनाहरु मात्र हुन्थे। जसले गर्दा मानिसले यसलाई सामान्य रुपमा लिन थाले । जब मृत्युका घटनाहरु आउन थाले त्यसपछि स्थानियहरु अझ बढी सचेत भएको पाइयो ।
Tags: कोरोनापार्वती अधिकारीशैलुङस्वच्छता प्रवर्द्धन